Date My Pet » Nei Varume Love utsinye Queen nyuchi
Nei Varume Love utsinye Queen nyuchi
Last updated: Nov. 22 2020 | 3 Maminitsi verenga
Ichi kudanana paIndaneti, uye kudanana nzvimbo vanoda dzinovaraidza, kwete zvishoma. Saka tinogona kutaura kuti kweminiti pamusoro imbwa hadzi? Uye ndinoreva “imbwa hadzi” Wekumusoro euphemistic Mupfungwa, sezvo Anorondedzera kwete canines, asi avo evanhu mhando ishamwari kuti anopa hadzi imbwa zita ravo zvakaipa. Asi nekuti ichi ndicho SFW nzvimbo uye achiedza mupe imbwa hadzi ruremekedzo uye rudo zvakavakodzera-ngatitaurei pane pamusoro utsinye Queen nyuchi (kana HQBs) uye varume vanovada, uye chii pane kudzidza kubva kwavari kuti ukama hwedu pachedu nani.
Nguva nenguva zvakare, Ndakanga chapupu vomuzana ruoko kuti chinonakidza pamusoro “zvakanaka Guy anoda HQB”. Zviri chaizvo chishamiso kuna tarira-ane hanya, mhando unovhunduka, noruremekedzo uye rupo murume anoita nguva dzose kuva pachinzvimbo Achikotamazve nenhendashure nokuda HQB ake; uye iye sokuti kuda miniti wose kuteerera kwake zvinodiwa uye akatakura brunt wake kusingasaruri kushora. Asi ukama aya vamwe zvakanakisisa chandakaona maererano hurefu; uye saizvozvowo, Handina vaziva, tichitarisa dzimwe Kumbova ukama kubudirira.
Saka zvatinogona, sezvo vakadzikama, vakadzi akanyatsofungwa vanodzidza kubva HQBs kukwezva uye kuchengeta varume mhando kuti vanoita sokuti havana dambudziko yokukwezva vachirichengeta?
1) HQBs vane yakasimba yokuzivikanwa
HQBs kuti ndivanaani uye zvavanoda. Vanoziva kuti vauye kune tafura uye dzinonakidza nekuti zvavanoda avo pachavo uye vangava akasiyana kubva wavo zvinofarirwa. It anofinha kufambidzana nomumwe pachako, uye HQBs zvavakaitawo izvi.
2) HQBs vane murayiro munyika yavo
An HQB sokuti kuva murayiro wenyika vakamupoteredza (kana iye zvechokwadi kana kuti kwete). Unhu uhwu inopa subconscious wedzera wake mumwe wacho chimiro-kana ane masimba vamwe pamusoro achimurwadzisa vafare, uye iye ane masimba pamusoro “Nyika”, Iye ane simba “Nyika” kubudikidza Marshal. Zviri kuti yose “kana A = B uye B = C, ipapo A = C” chinhu. Sei ichi ashandurire kuva inobatsira muromo? naka, kufunga vanhu vakaita semi neni uye muitiro kuva chaizvo shinga pamwe zvatinoita uye kutaurirana. Kuva dzika kwazvo akasiyana pane kuva hasha, rinova inokosha M.O. dzako avhareji HQB uye chii anopa wake kuti kutsarukana, tenuous kudzora “Nyika”. Asi ari zvakawanda dzika ichabereka murayiro mukuru wenyika yako, pasina zvimwe nemigumisiro yakaipa yaiparadza. Mumwe muenzaniso weizvi ingori huchiti zvaunoda uye nei zvine musoro kubva maonero enyu, sans ari achizvidza, anozvideredza hasha saka kazhinji akashandisa mukuita akafanana zvikumbiro kubudikidza HQBs.
3) The nokusingaperi-dzakakurumbira uye vakaedzwa, “Men Kufanana Challenge”!
Vangani kufambidzana nyaya uye mabhuku vane here kuverenga kuti vakazvipira kuna vamwe shanduro chikuru yokuti vanhu vanoda kupiwa aine chinetso, saka vanofunga zvokuwedzera rinokosha kana vanokwanisa kukunda vakati dambudziko? Men, pachavo, Ndichataura kuwana zvichinzvenga mukadzi anokwezva kupfuura Munhu bhuku nguva dzose-kuwanika yakazaruka. Dzimwe nguva elusiveness anoratidza zvinofanira ndinoti-kuva se-sei zvishoma kuomera ne kutaura chero zvakanaka Manzwiro kana zvaunofunga mhando (riri uko HQBs kupinda). Vamwe vanhu havagoni kurwisa muedzo kuedza muunzenza chero inofadza mhinduro kubva HQB nomutsa uye saka iye anova chinhu mubereko kukuru.
Unoita sei (zvakare, sezvo vakadzikama, mukadzi funga muri) tendeukai pachako zvivepo zvakaoma zvikuru? Izvi zvinogona kuva nyore disingenuous mutambo nokutamba kuti mabhuku akaita “The rules” (Fein uye Schneider) zvose, izvo kungasashanda wose uye zvinogona kukusiya kurwara-kunzwa uye kuvhiringidzika kudini uye kana. pachinzvimbo, kuvaka upenyu hwenyu kuti zvechokwadi zvakazara uye zvinofadza-kuita imi zvakaoma kwechokwadi vanoroverera pasi kufambidzana. Kwete chete zvichava Maka kuti yose “kuva kwakaoma” kupona kuti saka ungracefully uchiitwa HQBs (kuti vanhu vanowana anoyevedza), asi zuva rako Uchanzwa kuti zvakawanda aikoshesa kana kwawakaita pfungwa kupedza wako zvakajeka inokosha nguva naye.
4) No mitambo
Pane nguva apo vanhu rega kuteerera guessing mitambo-kana iri nemhaka vari zvishoma vakura, kana ukama pacharo wakati akura mhiri kwayo kwokutanga flirtation. Zvichida muromo ichi inogona kanenge zvishoma ndiye chete "hurefu" yose anomaly yapuwa HQB / Nice Guy ukama. HQBs vanoti zvavanoda, uye kana vachida nayo. Kune mitambo shoma uye intangibles nevanhu HQB, uye varume vazhinji vanowana kunozorodza ichi. Izvi zvaita mune zvinhu kubva vaviri dzokutambura mazano-kuva akananga pamwe kukurukura kwako (i.e. kuva dzika), uye zvakajeka vane zvamunoda kubva mudiwa wako kana asina nechakare chacho, maita akasuma dambudziko kuti achaita zvichida vanonakidzwa achipindira akasangana nokuti wanga zvakajeka saka iye haungatyi ake kuita achava pasina.
saka, Mwoyo-tora Kind mwoyo, uye mazano aya mwoyo-uye pamwe tinogona vanoti kurei mugove Nice Guy musika nokuti isu!
Ndingaitei Rega Kukurukura Dead Zone Uchengete Kubva Ichirova Out?